34 Sanduuq Bilaash ah, Boorso & Naqshadaynta Naqshadeynta Mockups | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Khayraadka, habyaalada
Ma waxaad raadineysaa jees jees, boorsooyin ama baakado kale? Khadadkaan waxaan badanaa ka keennaa nooc kasta oo kheyraad ah oo ka imanaya calaamadaha ama astaamaha, illaa maxay yihiin casharro lagu baranayo farsamo kasta oo la xiriirta barnaamijyada ugu muhiimsan ee naqshadeynta sida Illustrator ama Photoshop.
Markan waxaan u gudbi doonnaa PSD Mockups maxaa noqon lahaa baakadaha dhammaan noocyada wax soo saarka. Kuwani 20 jees jees ah waxay ku socdaan noocyo kala duwan oo wanaagsan, oo ay ku jiraan majaajillada sanduuqa ama jees jees, sidaas darteed waxaad heli kartaa midka aad rabto inaad soo bandhigto hadiyad gaar ah ama waxa u noqon kara mid shaqo gaar ah. Laga soo bilaabo jeesjeeska sanduuqa kabaha, calaamadda dhalooyinka khamriga ama dhowr loogu talagalay boorsooyinka noocyadooda kala duwan, runtu waxay tahay inay leeyihiin naqshad guul iyo gaar ah leh
Waa inaan xasuustaa kuwan mockups waa isha furan markaa waad u adeegsan kartaa sababo kasta ha noqotee adigoon wax walwal ah ka qabin. Waxaad sidoo kale mari kartaa gelitaankan si aad uhesho si aad u ogaato sida abuuro majaajillo adiga kuu gaar ah ama maxay noqon laheyd liis kale iyaga ka mid ah laakiin in ka badan loogu talagalay xayaysiinta dibadda. Kheyraadka ku anfacaya in ay lahaadaan jaangooyo wanaagsan oo ay ku muujiyaan macaamiisha ama ugu soo bandhigaan miisaaniyad qaab xirfadeed xitaa ka sii badan iyagoon waqti ku lumin wax.
1 Jees jees warqad bunni ah
2 Jeex jebinta dhalada dhoobada
3 Balaastikada Caaga
4 Jees jees dhalo
5 Jees jees jees
6 Daboolka rikoodhka Vinyl
7 Buug adag
8 Wixii sanduuqa alaabta buuxiyey
9 Bacda waraaqda buniga ah loogu quudhsado rootiga
10 Buugga xusuusta ee caadiga ah
11 Jees-garayn calaamadda dharka ama wax kasta
12 Jeex Jeeb Kale
13 Xirmada xirmooyinka CD-ga
15 Jeexjeexa baakada Cilindrical
16 Bacda caaga ah
17 Bacda dharka
18 Jeesjebinta sumadda khamriga
19 Jees jees sanduuqa kabaha
20 Jeegaanta sanduuqa kartoonka
21 Sumadda Weelka Yar
22 Baakadaha caaga ah
23 Baakadaha waraaqda buniga ah
24 Dhalada casiirka
25 Dhalooyinka malab
26 Kaarka sanduuqa kartoonka
27 Mashiinka dhalada
28 Baakadaha tuubada kartoonka
29 Boorsada boorsada
30 Jees jees jees
31 Bacda Dukaameysiga Mockup 03
32 Buug adag
34 Jaantusyo loogu talagalay buuga xusuus qorka
Jees jees warqad bunni ah
Un Jees jees fudud iyo xarrago si aad u abuuri karto taxane shandado ah warqad taxaddar iyo dadaal badan leh.
Jeex jebinta dhalada dhoobada
Waa inaad taxaddartaa in dhalada ama baakaduhu waxay leeyihiin midab khafiif ah si ay si fiican ugu habboon tahay jeesjeesyada ku jira mugdiga iyo dahabka.
Iyada oo ilo gaar ah, tani waxay si gaar ah loogu talagalay kuwa koobabka caagga ah ee aan inta badan gacanta ku hayno goorta waxaan tagnaa silsilado makhaayadaha cuntada degdega ah.
Jees jees dhalo
Sifiican ayaa looga beddeli karaa calaamadda aad awoodid u isticmaal biir farsamadaada ah inaad ku iibiso gudaha.
Jees jees jees
Naqshad yar oo aad u fudud sidaa darteed Bacda wax iibsiga noqda mid aad u qurux badan.
Daboolka rikoodhka Vinyl
para muusigga elektarooniga ah jees jeeska diiwaanka vinylka way kafiican tahay sidii loo waafajin lahaa codadka korantada ee muusikadaada.
Si loo daabaco buug, a naqshadeynta qoraalka oo si fiican ugu shaqeeya dhammaan noocyada tilmaamaha Barashada.
Wixii sanduuqa alaabta buuxiyey
Como hadaan iibin lahayn antivirus ama nidaam hawlgal oo cusub, jees jeeskan ayaa ku habboon.
Bacda waraaqda buniga ah loogu quudhsado rootiga
Wixii a makhaayada cuntada degdega ah bacdan waraaqda ah magaca aasaaskaaga.
Buugga xusuusta ee caadiga ah
Haddii aad u rabto hadiyad xarrago u ah saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah, tan jeesjeesku waa kafiican yahay asal ahaan iyo duluc gaar ah.
Jees-garayn calaamadda dharka ama wax kasta
Marnaba ma ogaan doontid goorta aan u baahanahay jilitaankan Ku calaamadee dharkayaga aan dooneyno inaan iibino.
Jeex Jeeb Kale
Jees jees kale boorso warqad bunni ah taasina waxay soo bandhigaysaa fadliga ay leedahay in lagu daro noocyada qoraalka noocyadiisa kala duwan.
Xirmada xirmooyinka CD-ga
In kasta oo CD-gu waxyar ka dhacay, Hadiyad ahaan xaflad waxay ku imaan kartaa waxtar.
Xarrago, fudud oo yar, Maxaad kale oo aad rabto?
Jeexjeexa baakada Cilindrical
Iyagu ma aha baradhada caanka ah, laakiin waxay waxtar weyn u yeelan kartaa xoogaa isku mid ah wax soo saarka cuntada.
Bacda caaga ah oo la iibiyo iyo markaa u hel xoogaa lacag ah dhamaadka xiga ee safarka safarka.
La mid ah sida kor ku xusan, laakiin leh dareenka deegaanka oo aan la seegi karin.
Jeesjebinta sumadda khamriga
Si waxaad ka shaqeysaa khamrigaaga, calaamaddan ayaa qumman, in kasta oo aan faan badan la hayn.
Jees jees sanduuqa kabaha
cunt midab badan oo kaftan ah oo nolol badan siiya kabaha ay tahay inay xirtaan qaab isku mid ah.
Jeegaanta sanduuqa kartoonka
Ma fududaan karto baakadan
Sumadda Weelka Yar
Dhammaan noocyada kala duwan ee hawlaha taas oo a sumadda weelka yar, Qof kasta oo kareemo leh?
Baakadaha caaga ah
Como hadaan saareynayno, baakadani waxay leedahay taabasho gaar ah.
Baakadaha waraaqda buniga ah
Mid kale oo leh ujeeddada kartoonka oo leh a font madhan xiisaha leh.
Ku dhowaad sida haday ahaan lahayd udgoon, laakiin inbadan oo casiir ah ama cabitaan isotonic ah.
La mid ah kii hore, in kastoo leh a naqshad aad u badan.
Kaarka sanduuqa kartoonka
Mawduuca ubaxa oo leh calaamado maran oo kaamil ah in lagu buuxiyo qoraal sharaxaad leh.
Perfecto saabuun ama saliidaas gaarka ah gadhka markay aad u moodo.
Baakadaha tuubada kartoonka
Kuwa kale habka xiisaha leh ee fahamka baakadaha xayeysiinta iyo suuqgeynta.
para hel lacag fiican dhamaadka safarka safarka, Jees jeeskan oo leh qoraal qosol leh ayaa gambaleelka siin kara.
Fudud oo aan wax badan raadsan más.
Bacda Dukaameysiga Mockup 03
Naqshado qalooca leh taabasho hore iyo casaan loogu talagalay a boorso xarrago leh taabasho dheddig.
Como hadaan dib ugu noqonay tobaneeyo sano oo kale, Jees jeeskani waa mid fudud.
cunt il gacanta, Jees jees kale oo loogu talagalay buugaagta xusuusta.
Jaantusyo loogu talagalay buuga xusuus qorka
Haddii ay tahay waa buug farsamo wax lagu barto, ku habboon.
Ma haysaa qaar jees jees inaad jeceshahay oo aad rabto inaad nala wadaagto? Tus naaska jeesjeeskaaga ama nooc kale oo baakado ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Sanduuqa iyo jees jeeska
Daahfurka MAD dijo
Waan jeclahay iyaga :)
Ku jawaab MAD Launch
Haye saaxiib, majaajilladaan adiga ma lihid